Solombavambahoaka : Tsy ampy ny rà latsaka, hivoaka ny parvis anio -
AccueilRaharaham-pirenenaSolombavambahoaka : Tsy ampy ny rà latsaka, hivoaka ny parvis anio
25/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ ny fisian’ny ra latsaka teny analakely ny sabotsy teo izay mazava fa tafiditra anatin’ ny paika tontosain’ ny mpanohitra, dia fantatra indray izao fa tsy ampy ireo aina nafoy sy rà nalatsaka ka hivoaka ny toerana hanaovana hetsika indray anio. Manomboka mangatsiaka mantsy ireo olona amin’ ny hetsika izay feno fitaka sy ny tatitra tsy nisy akory, ka antony nampihena sy nampalaina ny olona ho eny amin’ ny lapan’ ny tanàna, ny fanarahana ny lalàm-panorenana rahateo no hany fanalavirana ny mety sazy ho azon’ i Madagasikara. Maro ihany koa no efa tonga saina fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no vahaolana mba tsy hampikorosy fahana ny firenena, ka ho azy ireo dia ny fiandrasana ny fifidianana izay tsy ho ela no vahaolana. Tsy momba ny hisian’ ny rà latsaka ihany koa ny fitondram-panjakana ka antony indrindra namelana malalaka ny toerana etsy amin’ ny parvis ho an’ ireo depiote hanatanteraka hetsika, indrisy anefa fa toa ilay mpitandro filaminana efa nipetraka tsara indray no tadidin’ izy ireo.
Raha ny kabary izay nifandimby tetsy Analakely dia hoe ho eny Ambohidahy ireto solombavambahoaka ireto, hisintona ny sain’ny HCC. Mazava anefa fa mbola anatin’ny asa tanteraka ity andrim-panjakana ambony ity, izay eo ohatra ny fandinihana ny lalàm-pifidianana raha toa ka mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana. Ny hany mahagaga dia ny hoe ho eny Anosy ihany koa, maro noho izany no mametra-panontaniana hoe eo ve ny fanombohan’ ny krizy, satria ny taona 2009 dia notarihin’ i Andry Rajoelina teny ireo mpanara- dia azy, ka nahatonga ihany koa ny fahamaizan’ny radio Madagasikara. Dia ho sanatria ve dia ho tonga amin’ izay ezaka famotehana ny efa mba mitsangana izao indray ny hetsik’ireto solombavambahoaka miaro mpanao politika efa zatra manongam-panjakana ireto. Efa nomena azy ireo ny parvis etsy Analakely, nefa dia ho korontanin’ izy ireo avokoa izany ny tanàna rehetra.
Efa miditra tanteraka ao anatin’ny fety ny Malagasy. Nanomboka tamim-pilaminana ny faran’ny herinandro teo irey fety aman-danonana hanamarihana ny fetim-pirenena. Nisantatra izany ny « Carnaval de Madagascar » notanterahina nanomboka ny alakamisy lasa teo tetsy amin’ny araben’ny ...Tohiny